दिल्लीमा अक्सिजनको हाहाकार, तड्पिएरै मरे २५ बिरामी « Drishti News – Nepalese News Portal
दिल्लीमा अक्सिजनको हाहाकार, तड्पिएरै मरे २५ बिरामी
११ बैशाख २०७८, शनिबार 5:28 pm
नयाँदिल्ली । दिल्लीको गंगाराम अस्पतालमा पर्याप्त अक्सिजन आपूर्ति नहुँदा गएको २४ घण्टामा पच्चीस बिरामीको मृत्यु भएको छ ।
अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरले सामाजिक सञ्जालमा दुई घण्टाका लागि अक्सिजन रहेको र ६० जना बिरामीको ज्यान खतरामा रहेको भन्दै ‘एसओसएस’ सन्देशमार्फत् सहयोगका लागि याचना गरेको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर बलुजाका अनुसार अस्पतालमा शुक्रबार साँझ साँढे पाँच बजेसम्म आउनुपर्ने अक्सिजन मध्यराति १२ बजेमात्रै पुग्यो । तोकिएको समयभन्दा ७ घण्टा ढिलो अक्सिजन आइपुग्दा गम्भीर अवस्थाका २५ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो ।
अस्पतालमा पाँच सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमित उपचाररत रहेको र त्यसमध्ये १४० जनाभन्दा बढीलाई अक्सिजन दिइएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । अक्सिजन आपूर्तिपछि ठूलो खतरा टरेको भए पनि राति आपूर्ति भएको अक्सिजन धेरै समयका लागि नपुग्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी दिल्लीकै अर्को अस्पताल म्याक्सले पनि बिहीबार राति अक्सिजन केही घण्टाका लागि मात्र भएको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो । ‘सात सयभन्दा बढी बिरामी भर्ना छन् । एक घण्टाभन्दा कम समयलाई पुग्ने अक्सिजन छ । तत्काल सहयोग चाहियो । अक्सिजन सप्लाईका लागि पर्खिरहेका छौं । राति एक बजेदेखि पर्खिरहेका छौं,’
कोरोना महामारीको दोस्रा लहर सुरु भएसँगै भारतका दिल्लीलगायत राज्यहरुमा अक्सिजनको चरम अभाव भएको छ । अस्पताल पुगेका बिरामीले पनि समयमा अक्सिजन नपाउँदा ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
दुई दिनअघि दिल्लीका प्रमुख अस्पतालहरुले सरकारलाई अक्सिजन आपूर्तिका लागि आदेश जारी गर्न भन्दै अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए । त्यसपछि दिल्ली उच्च अदालतले सरकारले बिरामीको ज्यानसँग खेलबाड गरेको भन्दै तत्काल अक्सिजन आपूर्ति व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।
प्रहरीको सुडान मिसन औपचारिक रुपमा बन्द, अन्तिम टोली फर्कियो
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको सुडानस्थित एफपियु मिसन औपचारिक रुपमै बन्द भएको छ । मिसनमा खटिएको
को–को बन्दैछन् नेपाल प्रहरीमा डिआइजी ?
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा एआइजी र डिआइजीको दरबन्दी थपिने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । एसएसपीको
रेवतले ३२ बर्षपछि ‘तिमी तारे भीर’ गाउँदा रोए शान्तिराम ! (भिडियो)
काठमाडौं । ३२ बर्ष अगाडीको कुरा हो । काठमाडौंको रातोपुलस्थित झण्डै ८० बर्ष पुरानो बर्खेझार
एसएसपी थापाको एक वर्षमा तीन पटक सरुवा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका एसएसपी दीपक थापाको एक वर्षको अवधिमा तीन पटक सरुवा भएको छ
मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘म रचना रिमालप्रति वान साइड लभमा परेको छु’
षड्यन्त्रका कारण सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुग्यौँ : ओली
कम्युनिष्टलाई कमजोर बनाउन एमाले विभाजन गरियो : ओली
आज २१३ जनामा संक्रमण पुष्टि, ३ जनाको मृत्यु
केपी ओली कम्युनिष्ट पार्टीको कुपात्र हुन् : माधव नेपाल